Desensitization: တစ်ဦးကထုံပျော်ရွှင်မှုတုံ့ပြန်မှု - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
Desensitization ဆိုတာဟာစွဲလမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများစွာထဲကတစ်ခုပဲ။ အနည်းငယ်သောအခြား ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများပါဝင်သည်;
အသိ: အစွဲနှင့်ဆက်စပ်သော Pavlovian မှတ်ဉာဏ်ဆားကစ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်း
အလုပ်မဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုဆားကစ် - စိတ်ဖိစီးမှုသည်အလွယ်တကူပြန်ဖြစ်နိုင်သည်
မင်းမရှိသေးဘူးဆိုရင်ငါစောင့်ကြည့်ဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ် Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်: Porn စွဲ (2015), က desensitization ဖုံးလွှမ်းအဖြစ်။
မူးယစ်အပြုအမူ: Dopamine ၏ 300 လိင်အင်္ဂါ = တစ်လော, သင့်ရဲ့ခံတွင်းပျော်ရွှင်မှုများအတွက်ကာကွယ်ပါ နှင့် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်စားနပ်ရိက္ခာနှင့်လိင်အပေါ်တွင်ရှိသောဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်သင်တန်းခဲ့သလဲ dopamine receptors နှင့် desensitization ပေါ်မှာငါတို့အကောင်းဆုံးဆောင်းပါးများဖြစ်ကြသည်။
porn ထိုအခါနှင့်အခုဆိုရင်: ဦးနှောက်လေ့ကျင့်ရေးမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် နှင့် porn, အသစ်အဆန်းများ, နှင့် Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှု ဒီနေ့အင်တာနက်ပေါ်ကညစ်ညမ်းမှုကိုဘယ်လိုခံစားရသလဲဆိုတာရှင်းပြပါ။
အဆိုပါ neurotransmitter dopamine ကြောင့်အင်အားကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုလာဘ် circuitry ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ပြီး, ကလှုံ့ဆျောမှု, ဆုလာဘ်, အလိုဆန္ဒများ, မတရားသောနှင့်သင်တန်း၏, လိင်စိတ်နဲ့စိုက်ထူနောက်ကွယ်မှဖြစ်ပါတယ်။ dopamine အချက်ပြမှုအဆင့်အတန်းလူ့လေ့လာမှုများကိုနှစ်သက်၏ခံစားခကျြဆက်နွယ်နေပါသည်။ Dopamine ဆုလာဘ်များနှင့်စွဲလမ်းအတွက်အဓိကကစားသမားများနှင့် desensitization နားလည်သဘောပေါက်ဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
တိုတောင်းသော ယူကျု့ဗီဒီယို dopamine နဲ့ဆုလာဘ်ပေါ်မှာ။ အပေါ်နောက်ထပ် dopamine receptors ၏ downregulation
နားလည်ဖို့လွယ်တယ် စိတ်ပညာယနေ့တွင်ဆောင်းပါး ဘယ်လို dopamine လုပ်ဆောင်ချက်များကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝအသက်တာ၌ရှင်းပြ။
စွဲသုတေသီများအားဖြင့်ခဲ့သောဗီဒီယိုများ Nora Volkow (NIDA ညွှန်ကြားရေးမှူး) နှင့်ကိုအာဒံ Kepecs dopamine ရှင်းပြ။
A numbed အပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှုဒါမှမဟုတ် desensitization, တစ် ဦး စွဲဖြစ်စဉ်ကိုအားဖြင့်သွေးဆောင်အများအပြား ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ (နောက်ထပ်အာရုံခံစားမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှု“ sensitization”) ရှိသည် ရှင်းပြချက် ကြောင်း sensitization နှင့်အတူ desensitization နှိုင်းယှဉ်။ ဆုချီးမြှင့်စနစ် desensitization ၏အဓိကဇီဝကမ္မအင်္ဂါရပ် dopamine နှင့် opioid အချက်ပြကျဆင်းမှုဖြစ်ထင်နေသည်။
dopamine receptors အတွက်ကျဆင်း။ အများစုမှာလေ့လာမှုများတစ်ဦးထောက်ပြ dopamine D2 receptors အတွက်ကျဆင်း, ပုံမှန်အားဖြင့်အကြိုးအတွေ့အကြုံများမှလျော့နည်းထိခိုက်မခံတဲ့အဆိုပါစှဲလမျးသူထွက်ခွာရရှိနိုင် dopamine မှလျော့နည်း sensitivity ကိုဆိုလိုသည်။
အခြေခံအတွက်ကျဆင်းမှု (လုပ်သူများ) dopamine အဆင့်ဆင့်။ dopamine အဆင့်နိမ့်ခြင်းသည်စွဲလမ်းစေသည့်စွဲလမ်းစေသည့် dopamine-raising လှုပ်ရှားမှုများ၊
ပုံမှန်ဆုလာဘ်တုံ့ပြန် dopamine (phasic dopamine) ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေ။ Dopamine ပုံမှန်အားကြိုးလှုပ်ရှားမှုများမှတုန့်ပြန်မြင့်တက်။ သင့်ရဲ့စွဲ dopamine ၏အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်ပြီးတာနဲ့မတရားသော porn သုံးစွဲဖို့သငျသညျတိုက်တွန်းပေါ်ထွန်း။
CRF-1 receptors အတွက်ကျဆင်း, အရာ (သာကင်းနှင့်အတူလေ့လာခဲ့) ကို striatum အတွက် dopamine အဆင့်ဆင့်ပြုစုပျိုးထောင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု။
ဆုလာဘ် circuit ကိုမီးခိုးရောင်ကိစ္စ၏အရှုံး, အရာ dendrites အတွက်ဆုံးရှုံးမှုကိုဆိုလိုသည်။ ဤသည်နည်းပါးလာအာရုံကြောဆက်သွယ်မှုသို့မဟုတ် synapses သို့ဘာသာပြန်ပေးသည်။ တစ်ဦးက porn သုံးစွဲသူများ 2014 လေ့လာမှု ပိုပြီး porn အသုံးပြုမှုနှင့်အတူလျော့နည်းမီးခိုးရောင်ကိစ္စဆက်နွယ်နေကြောင်း။
အတွင်းကျဆင်း opioids သို့မဟုတ် opioid receptors။ ဒီထက်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ပုံမှန်အားကြိုးအတွေ့အကြုံများကနေလျော့နည်းအပျော်အပါးခံစားအတွက်ရလဒ်များ။
#2နှင့် #3နှစ်ခုစလုံးတွင် dopamine ကိုတားဆီးပေးသော dynorphin တိုးများလာခြင်း၊ အခြို့သောလမ်းကြောင်း၏အားနည်း (အချိုမှု) ဆုလာဘ် circuit ကိုမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ခြင်း, တနည်းအားဖြင့် desensitization အတော်လေးရှုပ်ထွေးပြီးသင်ယူဖို့ကြောက်မက်ဘွယ်တွေအများကြီးကျန်ရစ်သည်။
အဘယ်အရာကို desensitization ဖြစ်ပေါ်စေသည်?
Dopamine သည်၎င်းအားစတင်သည်။ အကယ်၍ dopamine သည်အလွန်မြင့်မားလွန်းလျှင်၎င်းသည်အာရုံကြောဆဲလ်များ၏အာရုံခံမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ တစ်ယောက်ယောက်ကဆက်ပြီးဆူညံနေရင်၊ dopamine ပို့လွှတ်သည့်အာရုံကြောဆဲလ်များသည် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သောအခါလက်ခံသည့်အာရုံကြောဆဲလ်များသည် dopamine (D2) receptors များကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်သူတို့၏“ နားများ” ကိုဖုံးအုပ်ထားသည်။ (ကြည့်ပါ Volkow စွဲပုစ္ဆာမှအဖြေလှန်နိုင်ပါစေ.)
အဆိုပါ desensitization ဖြစ်စဉ်ကို
အဆိုပါ desensitization ဖြစ်စဉ်ကိုပင်ကိုသဘာဝဆုလာဘ်နှင့်အတူ, မျှမျှတတအလျင်အမြန်စတင်နိုင်ပါတယ် ထိုကဲ့သို့သော junk အစားအစာအဖြစ်။ မည်သို့လျင်မြန်စွာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်အသုံးပြုမှုများ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်ဦးနှောက်၏အားနည်းချက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ဘယ်လောက်လဲ အလွန်အကျွံ ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများကြောင့်ဆုံးဖြတ်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပမာဏ၊ ကယ်လိုရီသုံးစွဲမှုသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်သည့်အချိန်ကဲ့သို့သောအပြင်ဘက်အပြုအမူများကြောင့်မဟုတ်ပါ။ လူနှစ်ယောက်အတူတူမဟုတ်ဘူး။
ပုံမှန်မဟုတ်သောအမြင့်ဆုံး dopamine အဆင့်ဆင့် desensitization စေမလိုအပ်ပါဘူးဖြစ်ကြသည်။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကင်းပိုကြီး neurochemical ပေါက်ကွဲမှု furnishes သော်လည်း, ကိုကင်းထက်သုံးစွဲသူတစ်ဦးဝေး သာ. ကြီးမြတ်ရာခိုင်နှုန်း hooks ။ dopamine အတော်များများဟာသေးငယ်တဲ့ hits ပိုပြီးနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်နည်းပါးလာပိုမိုပြင်းထန်သော hits ထက်ဦးနှောက်ကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့နိုင်ပါတယ်။
မဟုတ်သလို dopamine အဆင့်ဆင့်စဉ်ဆက်မပြတ် desensitization စေခြီးမွှောကျရနျလိုကြဘူး။ နှိုငျးယှဉျ overeating နှင့်အဝလွန်ဖြစ်လာ စီးကရက်ဆေးလိပ်မသောက်ရန်။ နှစ်ဦးစလုံး dopamine receptors ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုဆင်းထုတ်လုပ်ပေမယ့်ဝေးလျော့နည်းအချိန် puffing ထက်မစားသုံးစွဲနေသည်။
သဘာ ၀ အားဖြည့်တင်းမှုယန္တရားများကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းသည်သဘာဝအားဖြည့်ဆေးများအနေဖြင့် desensitization ဖြစ်ပေါ်စေသည့်အဓိကအချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ အလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းနှင့်လေးလံသောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများသည် 'stop' အချက်ပြချက်များကိုလျစ်လျူရှုကြပြီးသူတို့၏စွဲနေသည့် ဦး နှောက်သည်“ ကျေနပ်မှု” ကိုမခံစားရတော့သောကြောင့်စားသုံးခြင်းကိုဆက်လက်ပြုလုပ်သည်။ အမျိုးသားများအတွက်: မကြာခဏသုက်တစ်ဦးက Hangover စေပါသလား?)
Desensitization နောက်ကွယ်မှဖြစ်ပါသည် သည်းခံနေခြင်းအတူတူပင်တွေ့ကြုံခံစားရန် ပိုမို၍ ကြီးထွားစေရန်တွန်းအားလိုအပ်သည်။ ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ဆဲလ်များဖြစ်သော dopamine ကိုအရှိန်မြှင့်ရန်နည်းလမ်းသစ်များအဖြစ်သို့မကြာခဏတိုးများလာသည်။ အသစ်နှင့်ဖောက်ဖျက်ခံရသည့်မျှော်လင့်ချက်များ (အံ့အားသင့်မှု) သည် dopamine တိုးပွားစေသည်။
မကြာသေးမီကအင်တာနက်စွဲလမ်းမှု ဦး နှောက်လေ့လာမှုသုံးခုကအင်တာနက်စွဲသူများအတွက် dopamine အချက်ပြမှုကိုအကဲဖြတ်သည့်အနေဖြင့် desensitization ၏သီအိုရီဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုမဟုတ်ပါ။ တစ်ခုချင်းစီသည်ကွဲပြားခြားနားသောကွဲပြားမှုရှုထောင့်များကိုတိုင်းတာခဲ့ပြီးအင်တာနက်စွဲသူများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအကြားသိသိသာသာကွာခြားမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ လေ့လာမှုနံပါတ် ၂ မှာ -အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသို့မဟုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်ကြည့်"။
Desensitization နှင့် porn
ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများအကြောင်းဒီလေ့လာမှုမှာ - ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်အတူ Functional ဆက်သွယ်မှု Associated: Porn အပေါ်ဦးနှောက် (2014) ဂျာမနီနိုင်ငံမှ Max Planck Institute မှကျွမ်းကျင်သူများသည်တစ်ပတ်လျှင်နာရီပိုမိုမြင့်မားသောညစ်ညမ်းမှုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာသည်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့တွင်ပါ ၀ င်သောဆုရရှိသည့်တိုက်နယ်ကဏ္grayများတွင်မီးခိုးရောင်အမှုန်များလျော့နည်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒီဆုလာဘ် -related ဒေသတွင်း၌မီးခိုးရောင်ကိစ္စလျှော့ချအာရုံကြောဆက်သွယ်မှုနည်းပါးလာကိုဆိုလိုသည်။ နည်းနည်းအာရုံကြောဆက်သွယ်မှုကနှေးကွေးသောဆုလာဘ်လှုပ်ရှားမှု, ဒါမှမဟုတ်တစ် ဦး နံပါတ်အပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှုသို့ဘာသာပြန်ပေးသည်။ သုတေသီများကယင်းကိုရေရှည်ညစ်ညမ်းမှုထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူကြသည်။
ခဲစာရေးသူက ဆီမှKühnကပြောပါတယ် - "အဲဒီညစ်ညမ်းပုံမှန်စားသုံးမှုထက်ပိုသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသင်တို့၏အကျိုးစနစ်ကထွက်ကျီကိုဆိုလိုနိုင်။ "
အကျဉ်းချုပ်လှုံ့ဆော်မှုများလွန်းပြီး dopamine သို့မဟုတ် opioid receptors များကျလာသောအခါ ဦး နှောက်သည်တုန့်ပြန်မှုနည်းပါးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပျော်မွေ့မှုမှအကျိုးကျေးဇူးနည်းသည်။ ၎င်းသည်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုခံစားချက်များကိုပိုမိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတွန်းအားပေးသည်။
လေ့ တ ဦး တည်းသီးခြားလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန် dopamine လွှတ်ပေးရေး၏ယာယီကျဆင်းခြင်းသို့မဟုတ်ချုပ်ငြိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအခိုက်အတန့်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ Desensitization dopamine အချက်ပြမှုနှင့် D2 receptor များကျဆင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောရေရှည်အပြောင်းအလဲများကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည်စွဲလမ်းမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ဖွံ့ဖြိုးရန်နှင့်ပြောင်းပြန်ဖြစ်ရန်အချိန်ကြာမြင့်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ မ်းသာစရာ၊ ၀ တ္ထု၊ ပျော်စရာ၊ စိတ် ၀ င်စားစရာ၊ dopamine ၏အဓိကသတင်းမှာ -ဤအရေးကြီးသောဖြစ်ပါသည်, အာရုံစိုက်, ထိုသို့သတိရပါ။"
ဥပမာအနေနဲ့စားတာကိုသုံးတာပေါ့။ လူတစ်ယောက်ဆာလောင်မွတ်သိပ်သည့်အခါ dopamine သည်ဘာဂါ၏ပထမဆုံးကိုက်ခြင်းကိုမျှော်လင့်သည်။ နေ့လည်စာစားနေစဉ် dopamine ကျဆင်းသွားပြီးကျွန်ုပ်တို့လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်လာသည်။ နောက်ထပ် dopamine အချက်ပြမှုတွင်“ ငါအလုံအလောက်ရှိခဲ့တယ်” ဟုမဆိုလိုပါ။ သင်ကဘာဂါကိုနောက်တဖန်မလိုချင်တော့ပါ၊ သို့သော် အကယ်၍ မင်းကိုချောကလက်အညိုရောင်ကိုကမ်းလှမ်းမယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့ dopamine spikes တွေဟာပုံမှန်အားဖြင့်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုယန္တရားများကိုကျော်လွှားပြီးအချို့ရှိရန်လိုအပ်သည်။
နောက်ဥပမာတစ်ခုကသင့်မိတ်ဆွေ၏ Grand Canyon သို့သွားသောဓာတ်ပုံ၏ပုံကိုလှန်လှောကြည့်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သင်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ဓာတ်ပုံနှင့်အတူ dopamine အနည်းငယ်ဆန့်မှုရရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော်သင်လျင်မြန်စွာလေ့ကျင့်ပြီးနောက်ပုံသို့ပြောင်းပါ။ ဓါတ်ပုံတွေကိုနှိပ်တဲ့အခါအဲဒီအတိုင်းဖြစ်ပျက်နိုင်တယ် အားကစားရုပ်ပြ ရေကူးဝတ်စုံမော်ဒယ်များ။ သင်သည်အချို့သောရုပ်ပုံများကို (အလေ့အကျင့်နှေးကွေးခြင်း) တွင်မှီဝဲနေသော်လည်းအခြားရုပ်ပုံများ (အလေ့အကျင့်ကောင်းများ) နှင့်မတူပါ။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ပျက်အားငယ်ခြင်းခံရပါကကျွန်ုပ်သည် dopamine-elevating လုပ်ဆောင်မှုများကိုရှောင်ရှားရန်မလိုအပ်ပါသလား။
အားလုံးသောဆုလာဘ်အချို့ထပ် ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံဝေမျှအဖြစ်ဤသည်ယုတ္တိမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အရက်သောက်ခြင်းနှင့်ကိုကင်းစွဲခြင်းကြောင့်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုလျှော့ချခြင်းမရှိပါကသင်၏ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုတိုးပွားလာပြီး libido ယေဘုယျအားဖြင့်လျော့ကျသွားသည်။ ဒါကကျွန်တော်တို့ကို ဦး နှောက် circuit ကိုရှိထပ်တူကိုပြောပြသည်။ သို့သော်အတွေ့အကြုံက ၀ ိုင်သောက်ခြင်း၊ ချောကလက်စားခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းတို့သည်ကွဲပြားခြားနားကြောင်းအတွေ့အကြုံကဖော်ပြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုစီသည်ထပ်တူကျခြင်းအပြင်ထူးခြားသောလမ်းကြောင်းများပါဝင်သည်။
မကြာသေးမီကလေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရလိင်သည်သူကိုယ်တိုင်အကျိုးရှိသောအာရုံကြောဆဲလ်များကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုကင်း & စိတ်ကြွဆေး အဆိုပါမြှင့်လုပ်ဆောင် အတိအကျတူညီအာရုံကြောဆဲလ် ဆုလာဘ်စင်တာ၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်လုပ်ပေးအဖြစ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ သေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်း အာရုံကြောဆဲလ် activation ၏ meth နှင့်အစားအစာသို့မဟုတ်ရေအကြား (အခြားသဘာဝကဆုလာဘ်) ထပ်။
အပိုဆောင်းသုတေသနကတွေ့ရှိခဲ့သည် အထီးကြွက်များတွင်သုတ်ရည်လွှတ်အကျိုးကို circuit ကိုအာရုံကြောဆဲလ်တွေကျုံ့နိုင်ပါတယ် dopamine ထုတ်လုပ်ရန်။ ဤပုံမှန်ဖြစ်ရပ်သည်ထို dopamine အာရုံကြောဆဲလ်များအပေါ်၌ဘိန်းဖြူစွဲခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတုပသည်။ ဒါဟာလိင်မကောင်းဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး။ မူးယစ်ဆေးစွဲနေသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအိပ်ခန်းထဲပြန်ဝင်ရန်တိုက်တွန်းသည့်တူညီသောယန္တရားများကိုပြန်ပေးဆွဲသည်ဟုရိုးရှင်းစွာအသိပေးသည်။
ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင်မက်နှင့်ဘိန်းဖြူကဲ့သို့စွဲစေသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်၎င်းတို့အားပြန်ပေးဆွဲသောကြောင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည် တိကျသောအာရုံကြောဆဲလ် နှင့်လိင်ဆွဲဆောင်မှုစေရန်ပြောင်းလဲသောယန္တရားများ။ အခြားအပျော်အပါးအများစုသည်ထိုသို့မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်အကျွမ်းတဝင် "စကားပြောအချက်"အရာအားလုံး dopamine ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်ရယ်မောခြင်းသည်စွဲလမ်းစရာမလိုပါ၊ dopamine တိုးများလာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်မည်မျှကွာခြားနိုင်သနည်း။ ဆိတ်ကွယ်ရာကျရောက်ပါတယ်။
dopamine-raising လှုပ်ရှားမှုများကိုသင်ရှောင်ရှားနိုင်သလိုသင်လည်းမလုပ်သင့်ပါ။ ပုံမှန်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အရက်နှင့်အိုးအချို့ပင်လျှင်ပြaနာမဖြစ်စေသင့်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးအားလုံး၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ကဖိန်းဓာတ်နှင့်ကျန်းမာရေးကိုအမှန်တကယ်ကျန်းမာစွာစားသုံးခြင်းကိုရပ်တန့်နိုင်လျှင်ကောင်းလိမ့်မည်။
အနမ်း၊ အနုပညာ၊ အက၊ လေ့ကျင့်ခန်း၊ အားကစား၊ အစားအစာကောင်းသော၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးစသည့်သဘာဝဆုကျေးဇူးများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။ dopamine ကိုမြှင့်တင်ခြင်းအပြင်၎င်းလှုပ်ရှားမှုအများစုသည်လည်း oxytocin level ကိုမြင့်တက်စေသည်။ Oxytocin သည်ထူးခြားသည်။ ၎င်းသည်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်ဆုလိုင်းပတ်လမ်းကိုသက်ဝင်စေသည် နှင့် မတရားသောလျော့နည်းစေပါသည်။ အောက်ခြေလိုင်းရိုးရှင်း: ဤရှုပ်ထွေးသို့သင်တယ်ဘယ်အရာကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ ကျွန်မပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒီမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများဖတ်နေအကြံပြု: ငါသည်ငါ့ reboot ကာလအတွင်းအဘယ်အရာကိုလှုံ့ဆော်မှုကိုရှောင်ကြဉ်ရပါမည်နည်း
သာမန်မေးခွန်းတစ်ခုမှာ - “ ဘာထပ်ဖြည့်စွက်မှုနဲ့အစားအစာက dopamine receptor တွေပြန်လာတာကိုမြန်စေမလဲ။ ” မင်းရဲ့စွဲလမ်းမှုဟာအာဟာရချို့တဲ့မှုကြောင့်မဟုတ်တာကြောင့်ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်မပြုပြင်နိုင်ဘူး။ Dopamine receptors များသည်သင်၏ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီတွင်တွေ့ရသောအမိုင်နိုအက်ဆစ်များမှပြုလုပ်သောပရိုတိန်းများဖြစ်သည်။ Desensitization သည် stimulation အလွန်များခြင်း၊ အကယ်၍ သူတို့လိုချင်ပါကသင်၏အာရုံကြောဆဲလ်များသည် dopamine receptors ကိုမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်သည်။
ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ desensitization တွင်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်နေသောအကျိုးဆက်ကွင်းဆက်တွင်အဆက်အသွယ်မျိုးစုံပါ ၀ င်ပြီး၎င်းသည် dopamine အချက်ပြမှု (dopamine receptors & dopamine level) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သင့် tank တွင်သင့်တွင်ဓါတ်ငွေ့ (dopamine) များများစားစားရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ သို့သော်သင့်လောင်စာဆီစုပ်စက်ပျက်သွားပြီးသင်၏မီးပွားပလပ်တစ်ဝက်မှာပျောက်နေသည်။ ဓာတ်ငွေ့များထပ်ထည့်ခြင်းဖြင့်သင်၏ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
dopamine ပမာဏကိုမြှင့်တင်ရန်အဘယ်အရာစားရမည်ကိုဖုံးကွယ်ထားသည့်ဆောင်းပါးများသည်အလွန်အဓိပ္ပာယ်မရှိပါ။ ပထမ ဦး စွာ L-tyrosine (မကြာခဏထောက်ခံအကြံပြုသည်) dopamine (နှင့်အခြားအရေးကြီးသောဟော်မုန်းအနည်းငယ်) အတွက်ရှေ့ပြေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အစားအစာများတွင်အလွယ်တကူရရှိနိုင်သည်။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် dopamine ပါဝင်သောအစားအစာများသည်တန်ဖိုးမရှိပါ။ dopamine သည်သွေးနှင့် ဦး နှောက်အတားအဆီးကိုဖြတ်ကျော်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏အစာအိမ်ထဲတွင်ထည့်ထားသည့်အရာသည်သင်၏ ဦး နှောက်ထဲတွင် dopamine ပမာဏကိုတည်ငြိမ်အောင်မကူညီနိုင်ဟုဆိုလိုသည်။ တတိယအရေးအပါဆုံး desensitization ကိုအဓိကအားဖြင့် dopamine (D2) receptors များကျဆင်းခြင်းနှင့် synapses ပြောင်းလဲခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ (ပြန်လည်ထူထောင်သူတို့၏အကြံပေးချက်များကိုကြည့်ပါ ဖြည့်စွက်မှုများ.)
သင်သည်အဘယ်သို့ နိုင် ဖြစ်ပါတယ်ပြုပါ လေ့ကျင့် နှင့် သေချာစွာစဉ်းစား။ အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းနှစ်မျိုးလုံးတိုးပွါးသောတဦးတည်းအရာဖြစ်ပါသည် dopamine နှင့် dopamine receptors ။ ဒါ့အပြင်လေ့ကျင့်ခန်း မတရားသောလျော့ကျစေပါတယ် နှင့် စိတ်ကျရောဂါလျှော့ချပေးခဲ့။ လေ့လာမှုတစ်ခုအဘာဝနာ dopamine တစ်ဦးတိုးပွါးကြောင်းသတင်းပေးပို့ ဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါ 65%။ အခြား လေ့လာချက် ရေရှည်ဘာဝနာအတွက် ပို. တိုကျရိုကျ cortex မီးခိုးရောင်ကိစ္စတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ စွဲ desensitization နှင့်လျော့နည်း dopamine ဟာတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးကအောင်နှင့်ဆက်နွယ်သောတိုကျရိုကျ cortex မီးခိုးရောင်ကိစ္စ, တစ်ဦးကျဆင်းခြင်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီထက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စဟုခေါ်သည် hypofrontality, သူနှင့်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။
[မဆို PMO မပါဘဲ 27 ရက်ပေါင်း] “ ဒီမှာငါ့ဘဝမှာပြောင်းလဲသွားတဲ့“ rebooting” လုပ်ငန်းစဉ်ကနေရရှိလာတဲ့အပြောင်းအလဲများ - ရလဒ် ၁၀၀% သည်မှန်ကန်ပြီးသိသာထင်ရှားပြီး၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏သွင်ပြင်အားလုံးတွင်ပျံ့နှံ့နေသည်။ PMO zombifying trance မပါလျှင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အသားအရေကိုပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိစေပြီး၎င်းသည်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ရှင်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရာတွင်များစွာအထောက်အကူဖြစ်ပုံရသည်။ အခြားသူများစွာသည်တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုသတိပြုမိကြ။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည့်အခြေအနေများတွင်ပိုမိုသောသိမ်မွေ့သောအခြေအနေများတွင်အမျိုးသမီးများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သူတို့၏အကြောင်းများကိုစာဖတ်ခြင်းနှင့်တုန့်ပြန်မှုများပြုလုပ်လိုခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံလိုသောဆန္ဒတိုးပွားလာခြင်းနှင့်ယုံကြည်မှုအသစ်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ ဤသည်အဘယ်သူမျှမရလဒ်များအရအိပ်ယာအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်မည်သည့်သံသယရှိသူများအတွက်; ယုံကြည်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ၎င်းကိုကြိုးစားရန်ဖြစ်သည်။ မင်းမြင်လိမ့်မယ်”